6 yekuparura inotangisa munaNovember. Kune ese. | Zvazvino Zvinyorwa
6 yekuparura inotangisa munaNovember. Kune ese.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, Novela, Nhema nhema
Kusvika november uye zvakare zviripo kuburitsa kukuru nevaparidzi uye pamberi pechirongwa cheKisimusi. Nhasi ndinounza idzi 6: chii chitsva uye chinovaka yemazita akabudirira uye anotengesa zvakanyanya. Kune ese manakiro uye mazita makuru mu nhoroondo, nhema, nhoroondo, vechidiki, kuwedzera kune hutsva hutsva. Ngatitarisei.
1 Rebeca naJulieta - Olga Palma Ocaña naVanessa Alós Martín
2 Chakavanzika cheiyo Nyeredzi Fairies - Tea Stilton
3 Iko uye yang bhizinesi - Eduardo Mendoza
4 Hapana Chinodzikira - Lee Mwana
5 Kwese kwakaipisisa - César Pérez Gélida
6 Usarega - Harlan Coben
Rebecca naJuliet - Olga Palma Ocaña naVanessa Alós Martín
Tinotanga ne rudo nyaya pakati pevasikana vaviri vanozivana kubasa. Saka chokwadi uye matauriro autobiographical, ivo protagonists vanotiudza kuti sei ivo vasina kumbofunga kuti pazasi pehukama hwehukama panogona kuve nechimwe chinhuzve. Nekudaro, dzimwe nguva pamwechete uye dzimwe nguva zvakasiyana, ivo vanofanirwa kutarisana nenzanga, vaunoda, uye dzidza kuzvida sezvavari.
Chakavanzika chenyeredzi fairies - Tea Stilton
Vaverengi vadiki, kubva pamakore makumi matanhatu, vane chitsva chikamu che Club de Tea, hanzvadzi yaGerónimo Stilton neshamwari dzake, kuti panguva ino varikuenda nzvimbo. Kufungidzira uye chakavanzika chinogara chichifamba navo pazviitiko zvavo, ikozvino ivo vachashanyira nyika yeiyo Star Fairies. Uye chiedza chenyeredzi chiri kudzima nekuti Comet, mudzidzisi wehukama, anyangarika. Tea nechikwata chake zvichafanirwa kusvika pamiganhu yenyika kuti vamuwane uye vadzorere chakarasika chiyero.
Iyo yin neyang kutengesa - Eduardo Mendoza
Mendoza anodzoka aine nyowani Rufus Hondo nyaya mune akateedzana ayo akatanga ne Mambo anogamuchira. Zvakare neizvozvo pfungwa yekuseka ndizvo zvinoita, munyori anoongorora zvimwe nhoroondo, tsika nemagariro nguva yezana ramakore rechiXNUMX kubva kune prism yemukuru wayo.
Tinoenda ku chitubu 1975 uye mazuva aFranco akaverengwa. Kuona panorama, Rufo Batalla anoronga kudzokera kuBarcelona. Asi kana ave kuda kubva kuNew York anotambira Prince Tadeusz Tukuulo's chikumbiro chii chine chekuita nehurongwa hwake hwekupenga dzorerazve chigaro cheLivonia, nyika isipo.
Hapana chekurasa - Lee Mwana
Iyo inozivikanwa New York-yakavakirwa Briteni munyori anodzoka ne zita regumi nembiri kubva pane akateedzana nezvehunhu hwake hwakabudirira iye aimbove wemauto Jack Reacher. Panguva ino afunga kuyambuka nyika kubva kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kusvika kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, pasina mukwende uye usambocheuka kumashure. Asi zano rake rinodonha kana asvika Kuora mwoyo, guta diki uye rehemmetic re Colorado. Vekunze havagamuchirwa uye mapurisa anomunyevera kuti vachamuisa mutirongo kana akatsikirazve. Asi zvirokwazvo, isu tiri kutaura nezve hombe Jack Reacher uye izvo zvityisidziro naye hazvishande. Kusiyana. Ndichagara ipapo tsvaga zvakavanzika zvipi vanohwanda mukushayiwa tariro.
Kwese kwakaipisisa - César Pérez Gélida
For the 7 of noviembre Zvinotarisirwa kuti mutsva wePérez Gélida achabuda, uyo anodzoka neimwe yeanoimba eimba yake marino. Ino nguva dzinoverengeka dzinoonekwa Zvitunha zveungochani zvakaurayiwa muEast Berlin kubva kumagumo eCold War. Zviremera hazviratidze kufarira kuferefeta nyaya iyi kusvika ya mukuru weStasi mukuru uyo anofa uye akabata ruzivo rwakanyanya kuHurumende.
Victor Lavrov, ane ruzivo rwakawanda mukuzvibata kwepfungwa dzematsotsi, uye mutariri ari kure weKriminalpolizei, Otto bauer, ichava iyo mukutarisira kugadzirisa nyaya uye vachatevera tsoka dzemhondi ine utsinye.
Usakanda mapfumo pasi - Harlan Coben
Uye imwezve zita nyowani kubva kune iye akagadzira akateedzana Myron bolitar. Coben anotitora isu kuenda kune vechidiki ve napoleon dumas, kuti mugore rake rekupedzisira chikoro akarasikirwa nemunin'ina wake mutsaona inotyisa achifamba nemusikana wake. Mamwe mazuva mushure, Maura Wells, rudo rwake rukuru, zvakanyangarikawo asina kana trace uye anga achigara achitenda kuti zviitiko zviviri izvi zvaienderana. Makore gumi nemashanu gare gare kana ari mupurisa kubva kuguta raakakurira, une mukana wekuzviongorora zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 6 yekuparura inotangisa munaNovember. Kune ese.
William Shakespeare anotamba